Xukuumadda oo diyaar u ah in la bedelo xubnaha muranka ka jiro ee guddiga doorashada - Home somali news leader
Home NEWS Xukuumadda oo diyaar u ah in la bedelo xubnaha muranka ka jiro...
Xukuumadda oo diyaar u ah in la bedelo xubnaha muranka ka jiro ee guddiga doorashada
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo maanta ka hadlayay munaasabad ka dhacday Tiyaatarka Qaranka oo lagu taageerayay qoondada Haweenka ee golayaasha baarlamaanka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in dib u eegis lagu sameeyo xubnaha qaar ee guddiyada ee dareenka laga qabo.
Mahdi Guuleed ayaa sheegay in hab doorasho dadban in la galo lagu heshiiyay, balse loo baahan yahay in heshiiskaas la meel mariyo oo la fuliyo sida uu hadalka u dhigay.
Ra’iisul wasaare kuxigeenka ayaa ugu baaqay Maamul Goboleedyada in dhammaantood ay fuliyaan heshiiskaas, wixii tabasho jira la isu yimaado oo laga wada hadlo.
Waxaa uu sheegay inay diyaar u yihiin meeshii dareen laga qabo qof ama labo qof la bedelo, isla markaana shaqada horay u socoto, waxaana uu muujiyay in mar walba ay diyaar u yihiin gar iyo garawshiyo.
Guddiyada doorashada ee Xukuumadda magacawday ayaa muddooyinkii u dambeeyay si weyn loogu muransanaa, waxaana Midowga Musharaxiinta ay dalbadeen in la kala diro guddiyadaas oo ay ku jiraan qaar ka tirsan Askarta dowladda iyo shaqaalaha rayidka.
Previous articleXaalada Muqdisho oo degan, kaddib bannaan baxyadii dhaliyay is rasaaseynta
Next articleThe first Covid-19 vaccinations in the EU will probably take place before the end of the year